Tandidomin-doza Tsarafaritra – Andoharano: misy vatobe 500 taonina ahina hihotsaka indray | NewsMada
Tandidomin-doza Tsarafaritra – Andoharano: misy vatobe 500 taonina ahina hihotsaka indray
Par Taratra sur 09/05/2019
Mitaintaina indray ny mponina eny Tsarafaritra, Tsimbazaza raha vao nahita ny ekipan’ny BNGRC tonga teny an-toerana sy nanentana amin’ny tokony hiala amin’ny tranony, omaly. Vatobe 500 taonina be izao no ahina hohotsaka sy hikodia hiala eo amin’ny toerany.
Misy vatobe milanja 500 t eny Tsarafaritra Andoharano, Tsimbazaza, ahina hiala eo amin’ny toerana ka hikodia ety ambany. Efa misy trano fonenana maromaro anefa miorina manodidina ilay vatobe, araka ny fanazavan’ny mpandrindra ny BNGRC, Andriakaja Elak Olivier, omaly teny an-toerana. Nandray avy hatrany andraikitra ny teknisianina avy ao amin’ny BNGRC nijery ny zava-misy ary nanadihady ny fomba hanesorana ny vato ka tsy hitera-doza ho an’ny mponina eny. Nodiovina aloha ny faritra manakaiky ny vatobe ary hatomboka amin’ny herinandro ny famakiana azy tsikelikely amin’ny fitaovana sy ny tanana. Tsy azo heverina aloha, hatreto, ny hanapoaka ny vatobe satria misy trano fonenana.
Nesorina vonjimaika ireo olona (12) mipetraka amin’ny toeana manakaiky ilay vatobe hanamaivanana ny loza. Hitadiavana fotodrafitrasa hametrahana azy izy ireo mandra-pahavita ny asa famakiana fa tranolay aloha no natsangana handraisana azy ireo. Fantatra fa misy vato 23 eny amin’io faritra io ahina hikodia hiala amin’ny toerana avokoa ka mila handraisana fepetra koa ao anatin’izao fotoana maintany izao.
Indroa nisehoana loza vokatry ny vatobe nianjera sy ranontany nandrava trano teny Tsimialonjafy sy teny Ampamarinana ka namoizana aina maro ary naharava fananana ny fiandohan’ny taona lasa teo. Misy ampahany amin’ireo mponina nesorina vonjimaika teny no efa niverina satria efa nitsahatra ny orana. Nisy ireo nisafidy ny handao tanteraka ny trano fonenana ary nanorina fiainana vaovao amin’ny toeran-kafa.
Mbola mitoetra ny tandidon-doza amin’ny faritra rehetra manodidina ny vatobe ary nosokajina ho faritra mena amin’ny fihotsahan’ny tany sy ny vatobe.